कहाँ हरायो मानवता ? वडाध्यक्षले नै सेवा लिन आएका युवकलाई यो के गरेको ? « Etajakhabar
कहाँ हरायो मानवता ? वडाध्यक्षले नै सेवा लिन आएका युवकलाई यो के गरेको ?
काठमाडौ । जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले स्थानीय एक युवालाई कार्यालय परिसरमै डोरीले बाँधेर कु’टपिट गरेका छन्।
यही साउन १५ गते वडा कार्यालय परिसरमै वडाध्यक्ष नेपालीले स्थानीय सर्पे नेपालीलाई नि’र्घात कु’टपिट गरेका हुन्। वडाध्यक्षले कु’टपिट गर्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक भएपछि यो घटनप्रति धेरैले चासो राखेका छन्।
वडा कार्यालयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको बेला म’दिरा सेवन गरेर आएका नेपालीले अपशब्द बोल्दै ढुंगा प्र हा र गर्न थालेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
प्रहरीले भने म दि रा सेवन गरी हो ह ल्ला गरेकाले नियन्त्रणमा दिने क्रममा स्थानीयबाट ती युवामाथि केही हात पात भएको जनाएको छ। घटनाको विषयमा अहिलेसम्म कुनै पक्षबाट उजुरी नआएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ।
सम्बन्धित पक्षबाट उजुरी आएमा आवश्यक छानविन गरी दो’षीमाथि कारबाही गरिने प्रहरी निरीक्षक खुमानन्द न्यौपानेले बताए।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि घटनाप्रति चासो राखेका छन्। उनले असहाय नागरिकलाई डोरीले बाँधेर नि’र्घात कु’टपि’ट गर्ने जनप्रतिनिधि जुनसुकै दलका भए पनि कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने बताएका छन्।
‘जाजरकोट जुहि चाँदेको घटना निन्दनीय छ। असहाय नागरिकलाई डोरीले बाँ धेर नि’र्घात कु’टपिट गर्ने जनप्रतिनिधि जुनै दलका हुन्, कानुनी द’ण्डको भागिदार बन्नैपर्छ,’ शर्माले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ध्यानाकर्षण गराउँछु। यस्तो अमानवीय प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न दल र समाजको एक्यवद्धता जरुरी छ।’